चिसोमा टन्सिलले सतायो ? यसरी घरमै गर्न सकिन्छ उपचार – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/जिबनशैली/चिसोमा टन्सिलले सतायो ? यसरी घरमै गर्न सकिन्छ उपचार
चिसो बढ्दै गएको छ । जाडोयाममा अधिकांशको एउटै समस्या हुन्छ टन्सिलले सताउनु । हामीलाई थाहै छ, यो घाँटीको समस्या हो । जब टन्सिलाइटिस नामक ग्रन्थीमा संक्रमण हुन्छ, घाँटी भित्र घाउ भएको वा सुन्निएको अनुभव गर्छौं । यस्तो अवस्थामा खानपिन गर्न समस्या हुन्छ । खानपिन गर्न मात्र होइन, थुक निल्न पनि कठिन हुन्छ । त्यो भन्दा अर्को कठिनाइ हो, टन्सिलाइटिस ग्रन्थीमार्फत हानिकारक ब्याक्टेरिया शरीरभित्र पुग्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
वास्तवमा यो त्यस्तो ग्रन्थी हो, जसले सामान्य अवस्थामा हानिकारक ब्याक्टेरियाबाट शरीरलाई रक्षा गर्छ । मुखबाट शरीरमा जाने ब्याक्टेरिया रोक्ने काम यसले गर्छ । तर, जब यो ग्रन्थी नै संक्रमित हुन्छ भने, त्यसले शरीरमा कति जटिल समस्या निम्त्याउँछ । अक्सर, हामीलाई टन्सिल भइरहेको हुन्छ । टन्सिल भएपछि ज्वरो आउँछ, काम गर्न जाँगर चल्दैन । सामान्य दिनचर्या नै प्रभावित हुन्छ । अतः हामी यसको बिरुद्ध एन्टिबायोटिक चलाइदिन्छौं ।
-मनतातो तरल पदार्थ पिउने -सुपहरु बनाएर पिउने -हरेक ३ घन्टामा तातोपानीमा नुन हालेर कुल्ला गर्ने । बेसार पानीमा थोरै जिरा राखेर मनताते बनाएर पीउने -हर्बल चिया पिउने -कफि, जाँडरक्सीको प्रयोगबाट टाढा रहने -मनतातो पानीमा दालचिनी मिलाएर पानी पिउने । -अदुवा र मह हालेर चिया पिउने ।
-चिसोमा हिँडडुल नगर्ने ।
-निको नभएमा एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्ने -एक महिनामा ३ पटकसम्म टन्सिल हुन थालेमा शल्यक्रिया गर्न चिकित्सकसँग सुझाउँछन् । तर यो समस्या दोहोरीरहेको खण्डमा अनुभवी चिकित्सकसँग सल्लाह गरी राम्रोसाग जँचाएर मात्रै औषधी सेवन गर्ने ।
यौ, न शक्ति बढाउनु देखी क्यान्सरबाट बचाउन यि हुन प्याजका अचुक फाइदाहरु